ZBC Inoramba Ichiridza Nziyo Dzinorumbidza VaMugabe neBato Ravo
Chikunguru 27, 2010
Zimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC, ichiri kuridza nziyo dzinorumbidza mutungamiriri wenyika, Robert Mugabe, nebato ravo re ZANU-PF kunyange hazvo dare remakurukota rakati nziyo idzi hadzina kukodzera kuridzwa.
Dare remakurukota rakabvumirana svondo rapera kuti tunziyo utwu tunofanirwa kumiswa kuridzwa. Asi bazi rekuburitswa kwemashoko rakambotanga richiti raiva risati raziviswa nedare iri, ndokuzochinja roti dare remakurukota rinofanira kupa chisungo charo ku Broadcasting Authority of Zimbabwe, iyo inozoendesa chisungo ichi ku ZBC.
Vaimbova gurukota rekuburitswa kwemashoko, uye vari mumiriri we Tsholotsho North muparamende, Va Jonathan Moyo, vanoti vachaendesa ZBC kumatare kana ZBC ikabvisa nziyo idzi.
VaSabelo Ndlovu-Gatsheni vanodzidzisa pa University of Witwatersrand ku South Africa. VaNdlovu-Gatsheni vakanyora bhuku rinonzi ‘Do Zimbabweans Exist’ rinoongorora nyaya yemimhanzi yaishandiswa neZANU-PF musarudzo mumakore apfuura.
Va Ndlovu-Gatsheni vanoti ZANU-PF yava kugadzirira sarudzo saka yava kutangazve kuridza mimhanzi yakadai.
Va Tendai Chari vanodzidzisawo pa Venda University mu South Africa. VaChari vanotiwo havaoni vagari vemumadhorobha vachizochinjwa pfungwa dzavo nezvimbo izvi zvakaimbwa ne Mbare Chimurenga Choir mudamba ravo rinonzi Nyatsoterera.
Hurukuro naVa Sabelo Ndlovu-Gatsheni
Hurukuro naVa Tendai Chari